अभय पाण्डे काठमाडाैं, ११ फागुन
जिन्दगीलाई एउटै परिभाषामा बाँध्न गाह्रो छ । हरेक मानिसले जिन्दगीलाई आफ्नो दृष्टिकोणले हेर्छ । त्यहीअनुरूप बुझ्छ र परिभाषित गर्छ ।
जिन्दगीको परिभाषा असीमित भए पनि सत्यचाहिँ सीमित छन् । तीमध्ये दुई परम सत्य हुन्–जन्म र मृत्यु ।
हिन्दू दर्शनले जन्मलाई आत्माले शरीर धारण गर्ने प्रक्रियाको रूपमा हेर्छ । कुन शरीर धारण गर्ने हो, त्यो पूर्वजन्मको कर्मले निर्धारण गर्छ ।
विज्ञानले आत्माको अस्तित्वलाई नकार्छ । जन्मलाई नितान्त जैविक घटना मान्छ । विज्ञानले ‘कर्मको नियम’मा विश्वास नगरे पनि संयोगचाहिँ विश्वास गर्छ ।
हाम्रो जन्म संयोगले भएको हो । न हामी आफ्नो जन्मस्थान चुन्छौँ, न मातापिता चुन्छौँ । आफू जन्मदा जेजस्ता जैविक र सामाजिक पहिचान बोकेर आएका हुन्छौँ, त्यो कुनै पनि चुन्दैनाैँ ।
मृत्यु प्राकृतिक प्रक्रिया हो । कसै–कसैलाई यो जीवनबाट मुक्ति पनि हो । जन्मिएपछि एक दिन सबैले मर्नैपर्छ । एकथरी वैज्ञानिक यो सत्यलाई चुनौती दिने पक्षमा छन् ।
विज्ञापनलाई अलिकति फराकिलो दृष्टिगकोणले हेर्ने हो भने यसको परिभाषा एकदम छोटो छ । त्यो हो– सन्देश प्रवाह
उनीहरूको विचारमा बुढेसकाललाई एक रोगको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ । यसलाई रोगको दृष्टिकोणले हेरे शायद प्राकृतिक मृत्यु पनि सत्य रहने छैन ।
जीवनको तेस्रो सत्य हो, विज्ञापन । हामी जन्मन्छौँ, एक दिन मर्छौं । बीचको अवधिभर आफ्नो विज्ञापन गर्छौं । यो सुनेर अचम्म लाग्ला, विज्ञापन त ‘महज’(मार्केटिङ)को साधन मात्र हो ।
यो टीभी, रेडियो, अनलाइन,पत्रिका आदिमा देखिने/सुनिने कुरा हो । यो जीवनको सत्य कसरी हुन सक्छ ? विज्ञापनको र जीवनको संकुचित परिभाषालाई मान्ने हो भने यो सही पनि हो ।
विज्ञापनलाई अलिकति फराकिलो दृष्टिगकोणले हेर्ने हो भने यसको परिभाषा एकदम छोटो छ । त्यो हो– सन्देश प्रवाह ।
यो सन्देश वस्तु वा सेवाको पनि हुन सक्छ र मानिसको पनि । अर्कोतिर जीवनलाई एउटा फराकिलो दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने यो जैविक प्राणाली मात्र होइन, सञ्चार प्रणाली पनि हो ।
हामी आफ्नो हाउभाउ, लवाइ–खुवाइ, देखाइ, हिँडाइ, सामाजिक सञ्जालको पोष्ट्याइँ, बोली, व्यवहार, विचार, उपभोग आदिबाट निरन्तर आफ्नोबारेमा सन्देश प्रवाहित गरिरहेका हुन्छौँ ।
यो सन्देश प्रवाह चेतन वा अवचेतन रूपमा भइरहेको हुन्छ । मूलतः हाम्रो पहिचान, छवि, गुण, व्यक्तित्व वा हैसियतको बारेमा हुन्छ ।
कतिपय अवस्थामा हामी ‘फेक एड्भर्टाइजिङ’ पनि गरिरहेका हुन्छौँ । जसरी कतिपय वस्तु वा सेवाले ‘फेक एड्भर्टाइजिङ’ गर्छन् ।
यस्ता मानिस हामी हुँदै होइनौँ । हामी आफूलाई त्यस प्रकारको मानिसको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छौँ, अनलाइन/अफलाइन संसारमा ।
नैतिकता हराएको मानिस आफूलाई नैतिकवानको रूपमा विज्ञापन गरिरहेको हुन सक्छ । आत्मकेन्द्रित मानिसले आफूलाई देशको चिन्ताले सताएको विज्ञापन गरिरहेको हुन सक्छ । थोरै आय भएको मानिसले नक्कली रोलेक्स घडी लगाएर आफ्नो आर्थिक मजबुतीको विज्ञापन गरिरहेको हुन सक्छ ।
मानिसहरू मात्र होइन, पशुपंक्षी पनि आफ्नो विज्ञापन गर्छन् । उदाहरणका लागि मयुरलाई लिन सकिन्छ । मयुरको प्वाँख भाले मयुरको वंशाणुको विज्ञापन हो । लामो, बाक्लो र रंगीविरंगी प्वाँख आकर्षक हुन्छ, पोथी मयुरका लागि ।
‘एवोलुसनरी कन्सुमर साइकोलोजी’का प्रणेता गाड साडका अनुसार प्वाँख भाले मयुरको विज्ञापन हो । आफ्नो लामो प्वाँख फिँजाएर उसले पोथी मयुरलाई भनिरहेको हुन्छ– हेर ! मेरो वंशाणु गुणस्तरीय भएकै कारण मेरो प्वाँख यति लामो छ । मबाट जन्मने सन्तानको वंशाणु पनि गुणस्तरीय हुनेछ ।’
अन्य जनावरमा भाले वा पोथीले निश्चित प्रयोजनका लागि आफ्नो विज्ञापन गरिरहेका हुन्छन् ।
उत्पत्तिदेखि केही हजार वर्षअघिसम्म, मानवजाति १५० देखि २ सय जनाको समूहमा बस्थ्यो । त्यस्तो समूहमा सबैले एकअर्कालाई चिन्थे । व्यक्तिगतस्तरको अन्तर्क्रियाका कारण एकअर्काको व्यक्तित्व, गुण आदिसँग राम्ररी परिचित हुन्थे ।
त्यहाँ ‘फेक एड्भर्टाइजिङ’ को गुन्जायस थिएन । एवलुसनरी साइन्सका अनुसार प्राग ऐतिहासिक मानिस मुलतः यी चार कुराको विज्ञापन गर्थे ।
प्रजननीय योग्यता, हैसियत (शक्ति), उत्तरजिविता, स्वास्थ्य र व्यक्तित्व (पर्सनालिटी) । यस्तो विज्ञापन मूलतः २ उद्देश्यका लागि हुन्थ्याे– पहिलाः आफ्नो उत्तरजिविता (सरभाइभल) र दोस्रो आफ्नो वंशाणुको निरन्तरता (रिप्रोडक्सन) ।
जब हामी आफूलाई वस्तु वा सेवाको आभूषणले ढाक्छौँ, हाम्रो उद्देश्य ती वस्तु वा सेवाको स्वामित्वको आनन्द लिनुभन्दा बढी अरुलाई प्रभाव पार्नु हुन्छ
अहिले हामीले प्राकृतिक संसारभित्र एउटा बृहत र जटिल सामाजिक संसारको निर्माण गरेका छाैँ । जहाँ सामाजिक छवि, प्रतिष्ठा र हैसियत हाम्रा जैविक उद्देश्यसरह महत्त्वपूर्ण छन् । अहिले हामी सानाठूला शहरमा बस्छौँ, जहाँ मानिस एकअर्कालाई चिन्दैनन् ।
अब प्रत्यक्ष अन्तर्क्रियाबाट मात्र आफ्नोबारेमा सन्देश प्रवाह गर्न असम्भव छ । तसर्थ, हामी आफूले उपभोग गर्ने वस्तु वा सेवाको माध्यमबाट आफ्नो विज्ञापन गर्छौं । उपभोक्तावादमा हामीले उपभोग गर्ने वस्तु वा सेवा आफैँमा हाम्रा विज्ञापनका साधन हुन् ।
एवोलुसनरी मनोवैज्ञानिक जेफ्री मिलर भन्छन, ‘जब हामी आफूलाई वस्तु वा सेवाको आभूषणले ढाक्छौँ, हाम्रो उद्देश्य ती वस्तु वा सेवाको स्वामित्वको आनन्द लिनुभन्दा बढी अरुलाई प्रभाव पार्नु हुन्छ ।
अधिकांश वस्तु वा सेवा मूलत: पहिला संकेत हुन्, त्यसपछि मात्र भौतिक वस्तु । हाम्रो बृहत् सामाजिक मस्तिष्कको विकास एउटा मूल सामाजिक उद्देश्यका लागि भएको छ । त्यो हो– अरुको नजरमा राम्रो देखिनु ।
प्राग ऐतिहासिक युगदेखि आधुनिक युगसम्म जैविक र सामाजिक उद्देश्यको परिपूर्तिका लागि, हामीले अविछिन्न रूपमा आफ्नो विज्ञापन गर्दै आएका छाैँ ।
फरक यति मात्र हो कि, पहिले हामी प्रत्यक्ष अन्तर्क्रियाको माध्यमबाट आफ्नो विज्ञापन गर्थ्यौं । शहरीकरण र उपभोक्तावादको उदयपछि चाँही मूलत: आफूले उपभोग गर्ने वस्तु वा सेवाको माध्यमबाट गर्छौं ।
हामीले गर्ने आफ्नो विज्ञापन सामाजिकीकरणको परिणाम नभई जन्मजात प्रवृत्ति हो । त्यसैले यो जीवनको परम सत्य पनि हो ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन ११, २०७६, १३:०८:००